Ukuphupha igrisi yesikere Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Iphupha malunga ne-Scissors Grinder. Ngexesha lamaphupha, iinkqubo zokuqonda, imeko, iimvakalelo, ujonga izisombululo ezinokubakho, ukuba ufuna ukuqonda ukuba "kutheni" uphuphe elo phupha, qhubeka ufunda esi sikhokelo.
Igama elithi "isikere grinder" libhekisa kwiingcibi ezilola nokulungisa iimela ezibuthuntu, isikere nezinye izixhobo zokusika. Isikere esisiqalo savela kubuchule bokwenza umpu kwaye sabuyela kumandla okwazi ukulola isikere.
Nangona kunjalo, umsebenzi wesikere esilola wawusoloko ujongwa ngendlela ethoba isidima kwaye igama elimdaka elithi "isikere grinder" lisekhona kwezinye iindawo. Isetyenziselwa ukuchaza abantu abangenamakhaya okanye abantu abangenamsebenzi.
1 Uphawu lwephupha «isikere grinder» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «isikere grinder» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «isikere grinder» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «isikere grinder» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokubanzi, uphawu lwephupha «isikere esilola» yazisa imilo nabanye abantu kwi el mundo yonke imihla. Umphuphi ngokuqinisekileyo uya kuba msulwa kwezi zinto, kodwa akazukukwazi ukubaleka kwiingxabano kunye neziphumo zazo. Ngamanye amaxesha umonde unokuba yeyona ndlela ilungileyo kule meko kwaye ukulala kufuneka kulinde de izinto zigqibe kwakhona.
Isikali se-Scissor ephupheni sinokubonisa ukuba uthathe inkululeko enkulu kakhulu ekunyamekeleni ipropathi yakho. Umphuphi kufuneka enze ngokuzayo ngononophelo.
Nabani na obona isikere sisila ephupheni lakhe kufuneka abone ukuba umntu othile uzama ukuqhuba umsantsa phakathi kwabo nomntu osondeleyo kubo. Ke ngoko, umphuphi kufuneka ajonge imeko yakhe kwihlabathi lokwenyani kwaye afumanise abantu abangalunganga eyirhangqileyo. Mhlawumbi emva koko ungayeka le ndlela yokuziphatha.
Ukuba isikere silola isikere ephupheni, iphupha elo kufuneka liqonde ukuba kufuneka unxibelelane ngamagama acacileyo. Ukubona kwesikere esiliba ilitye lokusila ephupheni kuhlala kulumkisa ngeengozi ezisongelayo ngokuziphatha okukhohlisayo kwabanye abantu. Ukuba umfazi uphupha ngesisisi, kufuneka aqhelane nobudlelwane obubi kunye neenzame ezinkulu ebomini.
Uphawu lwephupha «isikere grinder» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo lokuchazwa kwephupha, isikere sisebenza kwisiphupha umntu ofuna ukudala ingxabano kubantu abasondeleyo. Ukuba kubonakala ephupheni, oku kuhlala kubonisa imeko ezithandabuzekayo. Umphuphi kufuneka aqaphele ngephupha lakhe ukuba ayisiyiyo yonke into njengoko injalo ekuqaleni. Kwimeko yemeko ethile, iintshukumo ezahlukeneyo zisaqhubeka ukuba ungaziqondi. Ke, nabani na ophupha ngesikere esilolayo kufuneka, ngokokuchazwa kwengqondo kwephupha elo, kufuneka abenalo unonophele indlela yokwenza izinto kwixa elizayo.
Ukuba isikere sisila isikere okanye imela ephupheni, oko kuthetha ukuba izakuzihlukanisa qhe lekile. Oku kunokuqondwa njengeemvakalelo ezindala. Umphuphi akafuni ukuyamkela le kude kube ngoku.
Uphawu lwephupha «isikere grinder» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwephupha lokomoya kutolika intsingiselo ye "scissor grinder" njengophawu lokuba kuya kufuneka uhlengahlengise ubunzima ukuze ufumane indlela yokomoya. Ukwenza oku kuphela ngokuba neyakhe ingqondo ephaphileyo ukwazi ukusombulula iimeko.